Kenya: Codbixinta Doorashada Madaxweyne ee kuceliska ah oo bilaabatay – SAWIRO |
Kenya: Codbixinta Doorashada Madaxweyne ee kuceliska ah oo bilaabatay – SAWIRO
Waxaa saaka oo Khamiis ah saacadu markay ahayd 6dii subaxnimo bilaabatay codbixinta doorashada Madaxweynaha ee kuceliska ah.
Caasimada Nairobi ayey si caadi ah uga socotaa codbixinta, walow ay jiraan banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhacay deegaanka Kibera oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbaheysiga mucaaridka NASA.
Raila Odinga hogaamiyaha mucaaridka ayaa qaadacay inuu ka qeyb galo doorashadan kuceliska ah kadib markii loo fulin waayey shuruudo uu ku xiray qaabka ay u dhaceyso codbixinta. Wuxuuna taageerayaashiisa ugu baaqay inaysan codkooda dhiibin, mucaaridka ayaa horey ugu goodiyey inay maanta dhigi doonaan banaanbaxyo aan horey loo arag.
Magaalada Kisumu oo ah goob uu taageero badan ku heysto Odinga ayaa waxaan illaa iyo hada la arag dad badan oo codkooda dhiibanaya, waxayna u muuqataa in taageerayaasha Nasa ay qaateen taladii hogaamiyahooda.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shacabka ugu baaqay inay codkooda dhiibtaan
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad u tartamaya xilka Madaxweynaha ayaa sheegay in amniga si weyn loo adkeeyey, wuxuuna uga digay mucaaridka inay wax fowdo ah sameeyaan, Uhuru ayaa horey ugu guuleystay codbixintii la qaaday 8dii bishii Agoosto isagoo xiligaasi helay 54% cododka, walow natiijadaasi ay laalshay maxkamada sare.
Hogaamiyaha Mucaaridka Odinga oo shalay taageerayaashiisa kula hadlay Uhuru Park, Nairobi
Odinga oo isagu codbixintii Agoosto galay kaalinta 2aad isagoo helay 45% cododka ayaa codsanayey in doorashadan kuceliska ah gebi ahaan la bedalo guddiga sare ee Doorashooyinka, wuxuuna codsaday in sidoo kale hawsha laga wareejiyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee fududeenaya hawlaha cod tirinta oo uu sheegay inay wax musuq maasuqeen, codsiyadaasi oo laga diiday.
Ururo taageersan Mucaaridka ayaa Maxkamada Sare u gudbiyey dacwad ah in dib loo dhigo doorashada, isku daygaasi ugu danbeeyey ayaa fashilay maalinimadii shalay kadib markii 5 garsoore ee maxkamada kamid ah ay imaan waayeen dhageysiga dacwadaasi, waxaana soo xaadiray oo kaliya guddoomiyaha garsoorayaasha maxkamada sare David Maraga.
Guddoomiyaha Maxkamada Sare David Maraga oo kaligiis soo xaadiray, Maxkamada Sare Nairobi 25 Okt 2017
Waxaa iyaguna jira lix murashax kale oo uu ku jiro siyaasiga Soomaaliga ah ee Dida oo iyaguna loo ogolaaday in lagu daro doorashadan kuceliska ah, walow murashaxiintan aan la fileyn in cododa badan helaan, maadaama codbixintii hore ee Agoosto ay heleen wax ka yar 1% cododka shacabka.
Goobaha codbixinta ayaa furnaan doona illaa 5pm galabta, waxaana diiwaangashan inay codkooda dhiibtaan dad gaaraya 19 milyan, inkastoo la filayo in tiro intaas ka yar ay codkooda dhiibtaan.